Sakafo mahafisaka ny kibo
D.P.A tara : Fa maninona? Inona no tokony atao?
Rehefa ara-dal�na tsara ny fisafoana nandritra ny vohoka, dia tokony ho fantatra foana ny fotoana hiterahana, na ilay antsoina hoe :
Lire la suite...	Miharatra volon�ny fivaviana : mahasalamana sa tsia ?
Samy manana ny tiany ny vehivavy, mahakasika ny volon�ny fivaviana. Ny fanontaniana manitikitika anefa dia ny hoe : ara-pahasalamana ve ny manala azy ireny sa tsia ?
Lire la suite...	Ireo lamaody mety hanimba ny fahasalamana
Mety hanimba ny fahasalamana ny sasantsasany amin�ny lamaodim-behivavy. Ny 10 septambra, tamin�ny heritaona i Shazia Khan, tompon�andraikitra voalohany amin�ny resaka ara-medikaly ao amin�ny Oniversite iray ao Etazonia, namaritra ireo lamaodim-behivavy 4, manimba ny fahasalamany.
Lire la suite...	� Kyste � amin�ny nono, misotroa ranona �brocoli�
Mety ho tratry ny � kystes mammaire �, karazana fivontosana amin�ny nono, ny ankabeazan�ny vehivavy latsaky ny 30 taona
Lire la suite...	Ireo mety ho fambaran�ny �cancer� hoditra
Isan'ny fomba ahafahana misoroka ny aretina goavana, ny fanaraha-maso akaiky ny vatana. Ho an'ny homamiadan'ny hoditra ohatra, dia misy fambara miseho ivelany, tokony hahamahina.
Lire la suite...	Fety : manao kiraro avo vodin-tongotra nefa tsy vizana
Ho avy izao ny fetin�ny Noely sy faran�ny taona, hivoaka ny kiraro avo vodin-tongotra ary mety ho vizana mitondra azy any am-piangonana, amin�ny Noely, na any amin�ny trano filanonana amin�ny faran�ny taona. Ireto no ataovy, hitandrovana ny fahasalamana, rehefa manao �talon�.
Lire la suite...	Misoroka sy mitsabo ny fitohanana
Olona 1 amin�ny 5 no ampijalian�ny fitohanana, ka sarotra vao mahavita mivalana. Efa ho avy izao ny fety, fotoana somary hirobarobana amin�ny sakafo isan-karazany, ka mety vao mainka ho tratran�ny fitohanana indray, ireo olona sarotiny. Ireto misy vahaolana vitsivitsy, hisorohana sy hitsaboana izany.
Lire la suite...	Sant�
12/07/2012 Zovy ny vehivavy 20 taona noho miakatra ka tsy maniry ny hanana kibo fisaka, izay heverina ho mariky ny hatsaram-bika ? Azo atao tsara ny manana io kibo fisaka io amin�ny alalan�ny sakafo , andramo ary!
Tsy misy ny kisendrasendra eo amin’ny resaka bika aman’endrika fa ny fikarakarana no tena zava-dehibe ary manomboka amin’ny sakafo izany. Ho an’ireo izay efa nanandrana nampiasa vatana dia mahalala fa tsy mora ny mampihena sady manafisaka io faritra iray amin’ny vatana io. Tsy azo lavina fa ny fampihetseham-batana no tena zava-dehibe amin’ny fanafisahana ny kibo fa fameno ihany ny sakafo. Indraindray mantsy, rehefa reraky ny fampiasam-batana dia manezakezaka mihinana ireo sakafo rehetra hita. Indraindray, ny fijoro mihitsy no mahatonga ilay kibo ho lasa toa matavy satria mikombona ilay olona ka manjary lasa tsy mihenjana intsony ny nofon-kibony. Zavatra iray voalohany tokony ho hajaina, araka izany ny fijoro, raha te hanana kibo fisaka tsara. Manaraka izany ny fanetseham-batana, izay efa voalaza teo. Tsy voatery hanao fanatanjahantena be akory fa afaka mandihy ihany koa na manao zumba, izay efa malaza tokoa amin’izao fotoana izao.
Raha ny sakafo kosa no hotenenina dia ireto ny tena tokony atao :
•	Mizàra mitsako miadana ary aoka tsy ho latsaky ny 20 mn ny fotoana isakafoanana mba hahatonga ny sakafo ho levona tsara.
•	Tazony ho 30g na 50g isan’andro ny “fibre” hanina. Ny sakafo izay tena ahitana “fibre” moa dia ireo voankazo, ny legioma ary ny anana manta. Tandremo fa raha betsaka loatra ny “fibre” dia manjary miteraka olana indray satria mety ho tratry ny “ballonements” izay mampibontsina ny kibo ihany koa.
•	Ireo legioma mantamanta no tena mahasoa. Azo atao ihany koa ny mihinana ireo misy lafarina fa atao amim-pahendrena fotsiny.
•	Aza atao ambanin-javatra ny hena sy ny atody izay manome hery kanefa tsy mampibontsina ny vavony sy ny kibo.
•	Tadidio fa mampitombo ny tahirin-drano eo anivon’ny kibo ny sira be loatra ao anatin’ny sakafo hanina. Aza dia tia sira loatra, araka izany, mba hampafisaka ilay kibo, izay mety ho rano no tena ao anatiny fa tsy tavy loatra.
•	Mihinàna zavatra misy “probiotique” tahaka ny yaourt, na fraomazy, izay tsy voatery hohanina amin’ny fatrany betsaka, mba hitsaboana ny taovam-pisakafoana ihany koa
Nanou <<Retour	Copyright 2009 Jejoo